Isiphazamisi Ekuzenzekelayo Kwezentengiso | Martech Zone
Isiphazamisi Ekuzenzekelayo Kwezentengiso
NgoMsombuluko, Mashi 10, 2014 NgoMsombuluko, Mashi 10, 2014 Douglas Karr
Lapho ngisanda kubhala nge- esedlule, samanje nekusasa lokumaketha, enye indawo obekugxilwe kuyo bekuwukuthengisa okuzenzakalelayo. Ngikhulume ngendlela imboni ehlukaniswe ngayo ngokweqiniso.
Kunezixazululo ezisezingeni eliphansi ezidinga ukuthi uqondanise izinqubo zazo ukuze uphumelele. Lokhu akubizi… okuningi kubiza izinkulungwane zamadola ngenyanga futhi ngokuyisisekelo kudinga ukuthi ubhale kabusha ukuthi inkampani yakho isebenza kanjani ukufanisa indlela yabo yokusebenza. Ngikholwa ukuthi lokhu kusho inhlekelele ezinkampanini eziningi… eziphumelelayo ngoba inqubo zona wayenakho usebenze kangcono kakhulu.
Izixazululo ezisezingeni eliphakeme zinikeza ithoni lokuguquguquka nokwenza ngokwezifiso, kepha ukuqaliswa kunesihluku. Ngezinye izikhathi, kudinga izinyanga zomsebenzi ngisho nezinhlelo zokuzinikela nezinhlelo zokuphatha. Sisebenza nezinkampani eziningana ezinamalayisense ukuzenzekelayo kokuzenzekelayo izixazululo, kepha kusamele basebenzise ngokugcwele futhi basebenzise ubuchwepheshe. Ngakho-ke… bakhokha izindleko ezinkulu, kepha bengalokothi babone okungaba khona.
Ngakwesokudla ku-Interactive kuphazamisa imakethe (futhi). I-Right On Interactive isivele iqanjwe njengenkampani ezenzakalelayo yokumaketha nguGleanster - ngokusetshenziswa okusheshayo nokuhlangana okulula kakhulu. Manje bashintsha indlela izinkampani ezingasebenzisa ngayo amasu wokumaketha we-lifecycle.
Ngakwesokudla ku-Interactive manje ivumela izinkampani ukuthi zingene ezimakethe ezisebenzisayo zokumaketha kunoma yiliphi izinga lobuchwepheshe bazo. Uma bengenalo isu, bangaqala nge- eziyisisekelo iphakethe. Uma bekwazile ukumaketha nge-imeyili futhi bakulungele ukumakethwa okubangelwe nokuvuza, bangahamba noma baqale ngakho ezishintshayo. Futhi uma sebelungele ukusebenzisa ngokugcwele ipulatifomu, bangahamba noma baqale umjikelezo wokuphila ukumaketha
Nakhu ukwephulwa kwe Ngakwesokudla ku-Interactive amaphakheji:
Basic - I-imeyili, ikhasi lokufikela kanye nethuluzi lefomu, ukubikwa kwe-imeyili nokulandelelwa, umakhi wengxenye, i-Web Analytics, umbiko wesivakashi ongaziwa, umbiko wesivakashi okhonjisiwe nombiko oshisayo wokuhola.
Ukuzenzekelayo - Ngaphezu kwe-Basic, engeza i-Social Analytics kanye ne-Reporting, Izinhlelo Zokumaketha ezizenzakalelayo, Ukubika Kwezinhlelo Zokumaketha, Ukubonakala ku-CRM kanye ne-Dedicated Client Success Manager.
I-Lifecycle - Ngaphezu kwazo zonke izici ze-Basic and Automation, i-Lifecycle Marketing, i-Lifecycle Stage kanye ne-Gate Criteria, ne-3D Scoring.
Okuhle kunakho konke, iphakethe eliyisisekelo libiza kancane kakhulu kunabathengisi abafakiwe abodwa embonini. Akunasidingo sokufuduka usuke komunye umthengisi uye komunye - ushiye ukuhlakanipha kwamakhasimende okwenzeka ngemuva. Nge-Right On Interactive yonke idatha isivele ikhona, zivumela nje izici eziningi njengoba unyukela kwiphakheji elandelayo.
Nakhu ukubuka konke ukuthi kanjani Ngakwesokudla ku-Interactive kuyahluka
Ukudalula: Ngakwesokudla ku-Interactive ungumxhasi we Martech Zone, bangamakhasimende we Highbridge (sikhiqize ividiyo), futhi singamakhasimende abo!
Tags: 3d amagoliCRMukumaketha kwempilo yamakhasimendeimeyili Marketingukubika nge-imeyiliukulandela i-imeyiliithuluzi lefomuamafomuimikhondo eshisayoikhasi lokufikaUkumaketha kwe-Lifecycleisiteji sokuphilangqo ekuhlanganyeleniRIOsalesforceingxenyeukwahlukanisaizibalo zomphakathiukubika kwezivakashiIsibongo Sakho
Yini i-Organic SEO?
Abakaze Bakufundise Lokhu Ekilasini Lokumaketha